Silurian fauna: njirimara, evolushọn na iche iche | Netwọk Mgbasa Ozi
Na oge Paleozoic anyị hụrụ ọtụtụ oge. Nke atọ n'ime ha bụ Oge Silurian. Ọ dị n'etiti Oge Ordovician na Oge Devonian. Otu n’ime njimara ya bụ oke ọrụ ala siri ike nke mebere ugwu ukwu. Banyere Anụmanụ Silurian Anyị na-achọtakwa nnukwu mmalite nke ọtụtụ ụdị na ọkwa nke ihe dị iche iche dị ndụ. Oge a chịrị nwere nnukwu mgbanwe na anụmanụ niile.
Ya mere, anyị ga-arara isiokwu a iji gwa gị njirimara niile na mbido nke ụmụ anụmanụ Silurian.
1 Oge Silurian
3 Anụmanụ Silurian
4 Faurụ Silurian: ahịhịa coral
Oge a dị ihe dị ka nde afọ iri abụọ na ise. Ọ malitere ihe dịka afọ 444 gara aga wee kwụsị ihe dịka 419 nde afọ gara aga. Ọ bụ nnukwu oge site na nyocha ala. N'ime oge a niile, usoro usoro ugwu nke anyị maara taa dịka Ugwu Appalachian nke North America mere.
N'oge a nnukwu diversification nke ndụ. Osisi vascular mbụ malitere ịpụta na ụmụ anụmanụ nwere mmalite dị egwu. Coral na ogbu na nkwonkwo bu umu anumanu nke bidoro kari. Enwekwara mkpochapu mmadu dika nke pere mpe. Ihe omume ndị a metụtara ihe dị ndụ na ebe obibi mmiri. Ọmụmaatụ, ọkara nke trilobite ụdị ahụ dịpụrụ adịpụ n'oge oge Silurian.
N'ihe banyere ihu igwe, mbara ala kwụsiri ike n'ụzọ dịtụ na usoro okpomọkụ. Ọnọdụ ihu igwe Siluria na-ekpokarị ọkụ. N'oge ndị a glaciers ndị kpụrụ n'oge gara aga na-emi odude ọzọ kwupụta n'ebe ndịda osisi. Enwere ihe odide ala nke n’egosiputara na onwere oke oge oke ebili n’oge a. Mgbe ihe omume igwe a gachara, okpomoku gburugburu ebe obibi yiri ka odi. O ruru n'ókè dị otú a na ọ malitere ime ka gburugburu ebe obibi dịtụ ntakịrị ma na-erughị oke nke oge ice. Na njedebe nke oge a ihu igwe malitere ịmalite iru mmiri ma na-ekpo ọkụ na ọnụ ọgụgụ dị ịrịba ama nke ọdịda.
Dika anyi kwuburu na mbu, ihe obula gbasara ndu, ma osisi ma umu anumanu, gbanwere mgbanwe di uku n’oge a. Nnukwu ndọtị ihe mere n'oge anụmanụ nke Silurian ebe ụfọdụ ụdị nwere ike ịba ụba na usoro ndị ọzọ wee malite. Ma ọ bụ na ihe omume mkpochapu na-enyere aka ịmepụta mgbanwe ọhụrụ maka ụdị ndị dị ndụ.
N'ime osisi anyị na-ahụ algae buru ibu na mbara igwe, ọkachasị algae na-acha akwụkwọ ndụ. Algae ndị a nwere ọrụ nke ijikwa nguzo nke gburugburu ebe ọ bụ na ha bụ ihe ndabere maka ọgbọ nke oxygen na ndabere nke agbụ trophic. N’oge a, ihe dị ịtụnanya na mmepe osisi. Ma nke ahụ bụ akpa osisi vaskụl malitere ịpụta. Osisi ndị a bụ ndị nwere arịa ụgbọ mmiri a maara dịka xylem na phloem.
Ná mmalite oge a, ọdịdị ala dị anya site n'ógbè anyị na-ahụ taa. Otutu ndi di iche iche di na mpaghara mmiri. Osisi izizi nke mepụtara na mbara igwe A gwara ha nọrọ n'akụkụ mmiri. N'ụzọ dị otú a, ha nwere ike ịnweta mmiri na nri.
Na ngwụsị nke oge Ordovician enwere usoro mkpochapụ nke metụtara ọtụtụ anụmanụ dị ugbu a. Dịka anyị kwuburu na mbụ, usoro mkpochapụ na-enyere ndị dị ndụ aka ịmịgharị ọhụrụ iji dịrị ndụ na gburugburu ebe obibi ọhụrụ. N'etiti ụdị ndị e mezuru gbanwee ma gbanwee maka gburugburu ebe ọhụrụ ndị a, anyị na-ahụ arthropods. Na arthropods bụ anụmanụ na-achị ụmụ anụmanụ nke Silurian.
Ọ bụ otu n'ime ndị otu nwere mmalite dị egwu. Achọpụtala ihe dịka fosili iri anọ na ise na-anọchite anya ndị nke a. Trilobites belatara ọnụọgụ ha na ụba dị ukwuu n'ihi oge mkpochapụ. N’oge a Myriapods na chelicerates malitere ịpụta na nke mbụ ya. Anụmanụ ndị a bidoro gbasaa na mpaghara ụwa niile.
N'aka nke ọzọ, ndị ahụ na-akpụ akpụ laghachiri ụfọdụ. N'etiti ndị mollusks dị n'oge ahụ anyị na-ahụ ụdị bivalves na gastropods. Mụ anụmanụ ndị a bi n’oké osimiri ahụ ma mee ka gburugburu ebe a mara mma. Anyị na-achọtakwa echinoderms dị ka anụmanụ ndị jisiri ike imeghari mgbe oge mkpochapu. N'ime echinoderms anyị na-ahụ crinoids nke mechara belata ọnụ ọgụgụ ha. A na-ahụta crinoids ndị a dị ka echinoderms mbụ na, yabụ, nke kacha ochie na mbara ụwa.
Otu iyak ekeme ndikụt nsio nsio n̄kpọ. N'oge Ordovician oge ostracoderms pụtara ọkachasị site n'inweghi agba. A na-ahụta anụmanụ ndị a dị ka akwụkwọ akụkọ kachasị ochie nke akwụkwọ ndekọ fosil dị na ya. Otú ọ dị, n’oge Silurian, ụdị azụ ndị ọzọ malitere ịpụta. N'etiti ụmụ anụmanụ Silurian anyị na-ahụkarị agba a maara dị ka placoderms. Otu n'ime njirimara ya dị iche iche bụ nke ahụ ha nwere shei n’elu ahu ha iji chebe onwe ha n’aka ndi na-eri ha.
Ofdị azụ ndị ọzọ bilitere n'oge azụ mmiri Silurian bụ ụzọ dị iche iche. A maara ha dị ka sharks spiny na ha bụ ụmụ nje dị ka ostracoderms, azụ cartilaginous. Enwere ụfọdụ obi abụọ n'etiti ndị ọkà mmụta sayensị banyere ọdịdị nke azụ cartilaginous. Fọdụ na-ekwu na ha pụtara n'oge Silurian fauna, ebe ndị ọzọ na-ekwu na ha pụtara n'oge ikpeazụ.
Faurụ Silurian: ahịhịa coral
Osimiri coral dị ezigbo mkpa na anụmanụ ndị Silurian. A maara na coral coral mbụ pụtara n'oge gara aga. O sina dị, ọ bụ n’oge a ka ha malitere ịmụba. Umu anumanu ndi ejikọtara na coral a nwere ike ịbawanye ebe nkesa na ụba ha. Nke a bụ n'ihi na mmiri iyi coral a nyere ha ihe niile ha chọrọ ibi.
N'ihi mmegharị nke ụdị ndị dị n'akụkụ coral coef, ha mejupụtara ụdị dị iche iche. Otu n'ime ndị nkịtị na-edebe nwere sponges na ụdị ndị ọzọ nke crinoids nke otu echinoderms.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmatakwu banyere anụmanụ ndị Silurian.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Anụmanụ Silurian
Mpụga mbara ala